Izindaba - Izinto ezihlanganisiwe (iJiangsu) zakhethwa njengeplatifomu yokubambisana yezenzo ezikhethekile "zokuqinisa iketanga nokwandisa idolobha" leplatifomu ye-Internet yaseJiangsu
Izinto eziyinhlanganisela (iJiangsu) yakhethwa njengeplatifomu ekhethekile yokubambisana yezenzo "yokuqinisa iketanga nokwandisa idolobha" leplatifomu ye-Internet ye-Jiangsu
Ukuze kukhuthazwe ukuthuthukiswa okunempilo kwamabhizinisi okukhiqiza esifundazweni saseJiangsu ngemuva kobhubhane futhi babone ukukhuphuka nokwenziwa kabusha kwemboni nokusetshenziswa, ngoJulayi 30, iqoqo lokuqala lama-38 “chain chain and expand of city” amapulatifomu wokubambisana e-Internet esiFundazweni saseJiangsu bakhululwa, futhi kwethulwa ngokusemthethweni isenzo esikhethekile “sokuqinisa iketango nokwandisa idolobha” esifundazweni saseJiangsu. AbakwaFucai (Jiangsu) e-commerce Co., Ltd. bebehambele lo mhlangano njengesikhulumi sokubambisana sezenzo ezikhethekile "zokuqinisa iketanga nokwandisa idolobha".
Le ngqungquthela ibisingathwe nguMnyango Wezimboni Nobuchwepheshe Bolwazi esifundazweni iJiangsu, futhi ibihlelwe yi-Alibaba East China Co, Ltd., Jiangsu industrial e-commerce alliance, saisheng Information Technology Research Institute Jiangsu Co, Ltd., Jiangsu Enterprise Information Association kanye Jiangsu Fengyuan Network Technology Development Co., Ltd.
Emhlanganweni, uWang Junkai, uMongameli we-Jiangsu saisheng Information Technology Research Institute, uthe ukuqaliswa kwalesi senzo esikhethekile kuhlose ukukhuthaza ukubambisana okujulile phakathi kwezinhlaka ze-Internet eziyizimboni nezinkundla ze-e-commerce ngaphakathi nangaphandle kwesifundazwe kanye neJiangsu ukukhiqiza amabhizinisi, nokukhuthaza kabanzi izindlela ezintathu zokubambisana eziku-inthanethi zokuhlinzekwa kwamafu, ukukhiqizwa kwamafu nokuthengiswa kwamafu embonini yezokukhiqiza yesifundazwe, kungeza amabhizinisi ayi-100000 efwini kungakapheli iminyaka emithathu futhi kuhlwanyelwe izimboni eziyisihluthulelo ezingama-20 Ipulatifomu lamafu lokuthengwa kwempahla lizodala Ama-50 c2m amafektri edijithali anokuthengiswa kwama-yuan angaphezu kwezigidi eziyi-100, ahlakulele amathalente e-commerce angaphezulu kuka-1000 ezimboni, enza lula amabhizinisi wokukhiqiza wesifundazwe ukufinyelela ukuthengiselana oku-inthanethi okungaphezulu kwezigidigidi ezingama-300 kanye nama-oda wenkonzo, futhi asize ngenkuthalo amabhizinisi azuze ukuthuthukiswa okuhlelekile nokunempilo Umqedazwe.
Emhlanganweni, abamele i-Alibaba, iSuning, ubuchwepheshe bedijithali be-Haier namanye amabhizinisi bakhulume ngokulandelana, beveza imibono yabo ngesenzo esikhethekile "sokuqinisa iketanga nokwandisa imakethe". Kulezi zinsuku, imboni yezokukhiqiza yaseChina ibhekene nezinkinga zentuthuko yangaphakathi njengokuxakeka ngokweqile nezindleko ezikhuphukayo, nezinkinga zangaphandle zokukhuphuka kwezindleko zabasebenzi, umhlaba namandla. Ngakho-ke, kuyaphuthuma ukuguqula nokwenza ngcono, futhi iDigitalization ehlakaniphile, ehlakaniphile, futhi engabizi kakhulu, ezishintshayo kanye nokuthuthuka kwekhwalithi ephezulu kuyindlela ejwayelekile. Lesi senzo esikhethekile siqoqe amapulatifomu amahle kakhulu esifundazweni saseJiangsu, esizokwenza iminikelo ngempumelelo kanye nezinguquko ekuthuthukisweni okuhlakaniphile kwamabhizinisi okukhiqiza, ukwakhiwa kokuthengwa kwezinto, ukuthuthukiswa komnotho wedijithali kanye nokutshalwa kwamathalenta afanele.
Emhlanganweni, uZhang Zhiping, iphini lomqondisi woMnyango Wezokuhlanganiswa Kwezimboni kanye Nezimboni, umemezele uhlu lwenqwaba yokuqala yamapulatifomu okusebenzisana angama-38 ezimbonini eSifundazweni saseJiangsu futhi engamele umcimbi wokuklonyeliswa. URui Jiangfeng, usihlalo weFucai (Jiangsu) e-commerce Co, Ltd., ubehambele umcimbi wokunikezwa amalayisense njengommeleli wesikhulumi sokubambisana.
Njengesikhulumi esihola phambili se-B2B e-commerce sokuthengiselana okume mpo ezintweni ezihlanganayo nasezimbonini esifundeni saseJiangsu, izinto ezihlanganisiwe (iJiangsu) zakhethwa njengeplatifomu yokubambisana ephelele ye- "chain chain nokwandiswa kwemakethe", okuzosiza ukwenziwa ngcono nokuguqulwa amabhizinisi angenhla naphansi embonini eyinhlanganisela nokwembathisa. Selokhu yasungulwa, iFucai (Jiangsu) inconywe kakhulu ngabalingani bayo bebhizinisi maqondana nokuhweba nge-e-commerce, ukuphathwa kwezinto ezihlakaniphile, ezezimali zezimboni, izinsizakalo zesayensi nobuchwepheshe kanye nemidiya yedijithali. Ngalesi sikhathi, njengeplatifomu yokubambisana, iwine umklomelo futhi yabamba iqhaza esenzweni esikhethekile "sokuqinisa iketanga nokwandisa imakethe", okuwukuqashelwa nokuzimisela kwezinto eziyinhlanganisela (iJiangsu) ezicini zamabhizinisi ezinsizakalo, ubuningi bomkhiqizo wensiza , ukuthengwa kwempahla, izinsizakalo zokuhweba zasekhaya nezangaphandle, ubuchwepheshe beqembu kanye nezinhlelo zokubambisana ezisekelayo.
Ngemuva komhlangano, uRui Jiangfeng, ongusihlalo weFucai (Jiangsu) e-commerce Co, Ltd., uthe kwinhlolokhono ukuthi ngemuva kwalolu bhubhane, izwe lakhuthaza ngamandla ukuthuthukiswa komnotho wedijithali. Ngokuhlanganiswa okujulile kobuchwepheshe bedijithali kanye nomnotho wangempela, ibilokhu ithuthuka ngokuqhubekayo izinga ledijithali, ukuxhumana kanye nobuhlakani, ikhuthaze ukwenziwa ngcono kwe-Internet yezimboni, ithuthukisa ukuthengwa kwezinhla nomfula, futhi yaqhubeka yandisa izindlela zokukhiqiza nezokumaketha kanye nomthelela Isifundazwe saseJiangsu.
Njengesiteji sokubambisana esisebenzayo "sokuqinisa iketanga nokwandisa idolobha", izinto zokwakha ezihlanganisiwe zeFujian (Jiangsu) zizonikeza ukudlala okugcwele ezinzuzweni zayo zepulatifomu, zisize ngenkuthalo amabhizinisi okukhiqiza esifundazweni "angene ku-inthanethi", aqhubeke nokuqinisa i-inthanethi futhi ukumemezela okungaxhunyiwe ku-inthanethi nokwenyusa amabhizinisi nemikhiqizo yakwaJiangsu, kusiza amabhizinisi ahumushe izinqubomgomo zikahulumeni, andise ngenkuthalo futhi ahlanganyele emisebenzini efanelekile njengebhuloho lokuxhumanisa izinhlangothi zombili, futhi asebenze ngokubambisana namabhizinisi afanele Ngokubambisana okujulile, nemodi entsha yokubambisana eku-inthanethi ye “ ukuthengwa kwamafu, ukukhiqizwa kwamafu nokuthengiswa kwamafu ”, sizokwakha ifektri yedijithali ye-c2m, sivule indawo yokuhambisa esezingeni eliphezulu futhi esezansi, siqonde ukuhlelwa kabusha okuhle kwemithombo yezokukhiqiza, sikhuthaze ukuguqulwa kanye nokwenza ngcono imboni yamabhizinisi nolwazi, futhi sandise umphumela kwe "chain chain nokwandiswa kwemakethe".
Eminyakeni emithathu ezayo, eqhutshwa isenzo esikhethekile "sokuqinisa iketanga nokwandisa imakethe", amandla okuthuthuka amaqoqo ezokukhiqiza athuthukile kaJiangsu, ukuxhaswa kwamaketanga ezimboni, ukuhweba kwasekhaya nakwamanye amazwe kuzodedelwa kakhulu. Njengomhlanganyeli nofakazi walo msebenzi, uFucai (Jiangsu) uzophendula ngenkuthalo ebizweni likahulumeni, anikeze ukudlala okuphelele ezinzuzweni zakhe zemithombo yolwazi kwidatha, emakethe, enhlokodolobha nasekwenziweni kwamakhompiyutha, futhi afake isandla ekugcwalisekeni kwe- “chain chain, smart ukukhiqiza nokukhulisa imakethe ”kwemboni yokukhiqiza yaseJiangsu.